भन्नेहरूका नाममा: हामी किन यति धेरै प्रतिक्रियावादी ? - Everest Talk
भन्नेहरूका नाममा: हामी किन यति धेरै प्रतिक्रियावादी ?1 min read
मधेशको माटो जति उर्वर छ खेतीका लागि, उत्ति नै जर्जर छ बेटीका लागि ।
२०७६, ४ चैत्र मंगलवार ११:११
– रेणुका जिसी खतिवडा
कुनै चिया गफमा सामेल भएर बौद्धिक बहस गर्न नसक्ने त होइनौँ नि ! तर चौतर्फी जिम्मेवारीले घेरिएका हामी, अधिकांश महिलाहरू आफ्नो मनमा उत्पन्न विचारलाई फेसबुकका भित्तामा पोस्टाउन मोबाइलको किबोर्ड चलाउने फुर्सद पनि प्राप्त गर्दैनौँ ।
केही समय अगाडि एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेका थियौँ । कार्यक्रम सामान्य नै थियो, तर उर्जा भने विशिष्ट प्राप्त गर्यौँ । विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेर आएका महिला दिदीबहिनीहरूका अनुभूति र विचारहरू सुन्न पाउनु आफैँमा खुशीको कुरा हुनेरहेछ । सफल व्यक्तित्वका संघर्षशील यात्राका, समाजदेखि विश्व समुदायमा देखिएका नवीन चिन्तनका, विचारका फरक-फरक आयामका कुराहरू सुन्न पाउनु र छलफलमा सहभागी हुन पाउनु हाम्रा लागि अहोभाग्यको कुरा हो ।
सोही कार्यक्रमको आयोजक मध्येकै एकजना म्यामसँग केहीदिनअगाडि भेट भयो । म्यामले दुखेसो पोख्दै भन्नुभयो- “हेर्नू न ! ‘खाई न पाई छालाको टोपी लाई’ भनेझैं भयो । त्यत्रो मिहिनेत गरेर आफ्नै गोजीको पैसा खर्च गरेर कार्यक्रम त गर्यौँ, तर आफ्नै वरपरका साथीहरूले नकारात्मक प्रतिक्रिया र आलोचना मात्रै गर्नुभयो । म्याम, अबदेखि त नगरूम् है केही कार्यक्रम पनि ।”
उहाँको अनुहारको दिक्दारी हटाउन भनिदिएँ- “भन्नेको मुख थुन्न को जाने म्याडम ? आलोचनालाई आलु र चना सम्झने, छोला-भजुला पकाउने, स्वाद लिई-लिई खाने ।”
क्षणिक नै सही, नैराश्यता छाएको उहाँको अनुहारमा अलिकति मुस्कान त आयो तर मेरो मन भने भित्रभित्रै पोलिरह्यो । अरूले नराम्रो भने भने भनेर पट्क्कै होइन । कार्यक्रम सकिदाको समय जुन आत्मविश्वास, जुन उत्साह उहाँको अनुहारमा देखिन्थ्यो, आज सबै गायब छ । छ त अनुहारभरि दिक्दारीको अनुभूति । र मलाई त्यही दिक्दारीले पोलिरह्यो।
सबैको जीवनमा यस्ता घटनाहरू घटेका छन्\_हुन्छन् । “राम्रो गर्यौँ । गर्न त सकिने रहेछ है ! अर्कोपटक योभन्दा अझै राम्रो गर्नुपर्छ |”- यस्तै सोच हाम्रा मनभरि आइरहँदा अचानक हामी अवाक् बनिदिन्छौँ, जब हाम्रा वरिपरिका मानिसले हामीले सोचेभन्दा धेरै फरक र नकारात्मक टिप्पणी गरिदिन्छ्न । अनि बल्लतल्ल जागेको आत्मविश्वास धुजाधुजा बनाएर कमजोर बनी थन्किन्छौँ आफैँभित्र ।
हामी मानिस हौँ । यावत कमजोरीसहितका मानिस । हामी कोही पनि पूर्ण छैनौँ । एकाध मानिसबाहेक हामी अधिकांश स-साना सफलतामा उत्साहित हुन्छौँ | त्यसैगरि स-साना गल्ती या अप्ठ्यारामा हतोत्साहित पनि हुन पुग्छौं ।
झट्ट सुन्दा या पढ्दा मैले उठाउन खोजेको विषयवस्तु सामान्य लाग्नसक्छ । तर यस्तै सामान्य कुराहरू थपिदैँ गएर जटिल भएका हुन् हाम्रा यात्राहरू ।
हामी बाँचेको समाज पितृसत्तात्मक सोचको जगमा उभिएको छ । कतिपय अवस्थामा हामी लिङ्गका आधारमा मात्र महिला छौँ । हाम्रो सोच, काम गराई, दृष्टिकोण पुरुषप्रधानात्मक सोचले ग्रसित छ ।
केटीमान्छे भएर पनि यसो गर्ने ?
आइमाईको काम होइन यो ?
बच्चैदेखि यस्तै सुनेर हुर्केका हामी आफ्ना सीमितता आफैँ निर्धारण गर्छौँ । यस्तो अवस्थाबाट उठेर बल्लतल्ल आत्मविश्वास जगाउदैँ गरेका धेरै दिदीबहिनीहरूलाई स-साना प्रतिक्रिया र आलोचनाले पनि धेरै फरक पार्नसक्छ । कतिपय सेलिब्रेटीहरूले समेत संघर्षको समयमा ट्रोल या नकारात्मक प्रतिक्रियाको सिकार भएर डिप्रेसनमा पुगेको बताएको बेलामैका बताउने गरेका छन् । यसकारण पनि यस्ता सामान्य विषयवस्तुलाई सूक्ष्म तरिकाले हेर्न जरुरी छ ।
पछिल्लो समय यस्तो लाग्न थालेको छ, कतै हामीहरू ज्यादा प्रतिक्रियावादी भइरहेका त छैनौँ ? हामीसँग सूचना र सन्चारका साधनहरूको प्रयाप्त उपलब्धता छ । जसका कारण कोठामा बसीबसी स-साना कार्यक्रम हुन् या ठूला घटना-परिघटना हुन, कति सजिलै नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरिदिन्छौँ । विषयवस्तुको गहिराईमा नपुगी क्षणिक आवेगमा आएर बोलेका या लेखिएका यस्ता कुराहरूले अरूको जीवनमा कस्तो फरक पार्छ ? त्यो बारेमा लेख्नु या बोल्नुअगाडि कसैले सोचेका छौँ त ?
एउटा कार्यक्रममा आफ्ना संघर्षका दिन सम्झदैँ सफल महिला नेतृ, संघीय संसद विकास तथा प्रवुधि समिति सभापति मा. कल्याणी खड्काले भन्नुभएथ्यो- “बरु एक्लै बन, तर सत्यको पक्षमा उभ्भ । अन्त्यमा जीत त सत्यको नै हुनेछ।”
मधेशको माटो जति उर्वर छ खेतीका लागि, उत्ति नै जर्जर छ बेटीका लागि । तत्कालीन अवस्थामा झन कस्तो हुँदो हो ? त्यो अवस्थादेखि संघर्ष गरेर राज्यव्यवस्थाका अनेकन परिवर्तनका अगुवाइ गर्दै, नीतिनिर्माण लगायत विविध पक्षहरूमा उपस्थित भइसक्नुभएकी कल्याणी खड्काका विचारहरू र अनुभूतिहरूले साँच्चिकै रिचार्ज गर्ने काम गरेको थियो, कमसेकम मेरो आत्मविश्वासलाई।
सोचिल्याउँछु, आफैँलाई हेर्छु, वरिपरिका साथीहरूलाई नियाल्छु, कति पृथक छौँ हामी ! हामीसँग अथाह क्षमता छ | हाम्रो काम गर्ने शैली, सोच्ने तरीकादेखि लिएर यावत् कुराहरू फरक भएर पनि अहँ हामी कतै कमजोर छैनौँ । हामीलाई सहि-गलत थाहा छ, तर हामीले हाम्रो यात्रा थालनीपूर्व त्यस्ता व्यक्ति वा प्रतिक्रियाको बारेमा सोच्न थाल्छौँ | अनि आफैँलाई खुम्चाउँछौँ, र भन्छौँ- “जहाँ छौँ ठीकै त छौँ ! नदुखेको टाउको किन दुखाउनु ?”
सोचौँ त ! क्लारा जेट्क्लिन या अन्य अगुवा महिलाहरूले यस्तै सोच राखेको भए हाम्रो अवस्था के हुन्थ्यो ? कहाँ हुन्थ्यौँ हामी अहिले ?
कवि तथा आख्यानकार सरस्वती प्रतीक्षाले भनेकी छिन्- “मैले एकै मानिसको अनुहारमा आधा मित्र र आधा दुश्मनको रूप देखेकी छु ।”
हामीले बाँचेको समय र भुगोल एकै हो । हामीसँग पनि यस्ता व्यक्ति वा प्रवृतिको कमी छैन । तर त्यस्ता व्यक्ति या प्रवृत्तिका कारण अबको समयमा पनि हामी आफ्नो मनलाई अनेकन रहर, सपना र चाहनाको समाधीस्थल बनाएर चुपचाप बसिरहन्छौँ भने त्यो हाम्रो कमजोरी हुन्छ कि त !
बाटोमा तिनै व्यक्ति भेटिन्छन्, जसले यात्रा गर्छन् । सानो चोटपटक या ठूलो भवितव्यमा पनि तिनै पर्दछन्, जो यात्रारत छन् । अनि गन्तव्यमा पनि त तिनै व्यक्ति पुग्छन्, जसले यावत चुनौतीको सामना गर्दै यात्रा गरेका हुन्छन् । त्यसैले जीवनमा यात्रासँग नडराऔँ । हाम्रो क्षमता के हो ? कसरी सबैलाई समेट्न सकिन्छ ? कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ ? हाम्रा सीमितताभित्र कसरी धेरै सहभागिता गराउन सकिन्छ ? हाम्रो सानो प्रयासले पनि कसैको जीवनमा केही सकारात्मक प्रयास ल्याउन सकिन्छ कि त ? अब हाम्रो ध्यान यता जान जरुरी छ ।
नभुलौँ, खुट्टा तान्नेहरूको स्थान सधैं खुट्टाको मुनि नै हुन्छ । भन्नेहरूको काम नै भन्ने हो । कसैले आरिसले भन्लान्, कसैले सोच्ने शक्तिको कमीले भन्लान्, कसैले नबुझेर भन्लान्, कसैले जिब्रोको स्वाद फेर्न भन्लान् । भन्नेहरूले हामीले काम गर्दा पनि भन्छन्, चुपचाप बस्दा पनि भन्छन् । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिहरूको संकुचित सोचको सिकार हामी किन हुने ? आत्मबल दर्हो बनाऔँ । हामीले हाम्रा कमजोरीबाट सिक्ने हो । गल्ती सुधार गर्ने हो । सिक्न र सुधार गर्न पछि नपरौँ ।
देशको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मजाक उडाएर आनन्द लिने माटोमा उभिएका हामीले ‘कसले के भन्छ ?’ भनेर, भन्नेहरूसँग डराएर कामबाटै भाग्नु हाम्रै मुर्खता हुन आउँछ |
नकारात्मक प्रतिक्रिया दिनेहरूलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं । गलत दृष्टिकोण बोकेकालाई स-सम्मान गालिबको यो शेर अर्पण गरौँ-
जीवनभरी नै गालिब यही गल्ती गरिरहें
मैलो मुहारमै थियो तर ऎना सफा गरिरहें…..
बस भन्नेहरूको बुद्धिको बिर्को खुलोस् । उनीहरूको मुहारको मैलौ छिटै सफा होस् | यहि कामनाका साथ हिँडौँ यात्राहरूमा ।
Tags: प्रतिक्रियावादीभन्नेहरूका नाममारेणुका जिसी खतिवडा
२०७६, २६ चैत्र बुधबार ०७:५८